टुँडिखेलबाटै हिमाल देखिन्थ्याे, अब त अग्ला घरले छेक्याे : सत्यमोहन जोशी – Khabar Silo
टुँडिखेलबाटै हिमाल देखिन्थ्याे, अब त अग्ला घरले छेक्याे : सत्यमोहन जोशी
ललितपुर, ३ माघ । ‘शताब्दी पुरुष’ सत्यमोहन जोशीले विसं १९९० को भूकम्पपश्चात उपत्यकाबासी काठमाडौँको टँडिखेलमा गएर रात बसेको स्मरण गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस–२०७६ का अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बिहीबार उहाँले भन्नुभयो, “त्यस बेला टुँडिखेल एसियाको सबैभन्दा ठूलो ठाउँ थियो । हाल टुँडिखेल सानो बन्दै गएको हुँदा त्यसको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।”
जोशीले विगतमा टुँडिखेलबाट हिमाल र पहाड छर्लङ देखिने स्मरण पनि गर्नुभयो । अचेल त अग्ला घरका कारण हिमाल छेकिन पुगेको उहाँकाे गुनासो थियाे।
कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्यालले पाटनमा सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका गर्न भवन निर्माण आचारसंहितालाई अनिवार्य लागू हुनुपर्ने बताउनुभयाे । ललितपुरका प्रजिअ भगीरथ पाण्डेले भविष्यमा दोहोरिने सङ्कटको विचार गरी निजी घर बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
काठमाडौंमा किन खेल्दैछ बादल र घामले लुकामारी ? यस्तो रहेछ खास कारण !
काठमाडौं । देशको पश्चिम भेग भएर पश्चिम न्यून चापीय प्रणाली नेपाल भित्रिएकोले आगामी ३ दिन बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।मौसमविद् प्रतीभा मानन्धरकाअनुसार अफगानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै सोमबार बिहान भित्रिएको नयाँ प्रणालीको प्रभाव अहिले देशको पश्चिम भागमा परिरहेको छ । यसकै प्रभावस्वरूप हिमाली भेगमा हिमपात र पश्चिमकै पहाडी र […]
चाहिनेभन्दा बढी नै भयाे हिउँदे वर्षा, आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षा र हिमपात हुने
यसकारण १५ किलो तौल बढाउँदै कृति सेनन